आज २०७७ फाल्गुन ९ गते आइतबारको राशिफल - Kamana News
मंगलवार, फाल्गुन १८ गते २०७७
सहकारीमार्फत वन तथा वातावरण क्षेत्रमा युवालाई उद्यमशिल बन्नाउन जोड दिउँः मन्त्री आले
हट बिपासाका दाम्पति फेरी भाईरल
के सुनको मूल्य ओरालो लागेकै हो? आज एकैदिन घट्यो १७ सयले
बीमा कम्पनीमा क्रस होल्डिङको अध्ययन गर्न निर्देशन
‘पिपलु’ नाजिर र अस्मिताको रोमान्टिक अवतार
# विवेकशील साझा
आइतवार, फाल्गुन ९ २०७७
आज २०७७ फाल्गुन ९ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७७ फाल्गुन ९ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । मनमा उमंग छाउनेछ । आर्थिक पक्ष सबल रहने छ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । माता पितासँगको सम्बन्धमा सुधार हुँदै जानेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ सहयोग रहनेछ ।
आर्थिक पक्ष कमजोर बन्नेछ । यात्राअघि साबधानी अपनाउनु होला । नयाँ कामलाई गोप्य राखेरै योजना अघि बढाउनु होला । धार्मिक काममा मन जानेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आउनेछ । सन्तानको प्रगतीले मन प्रफुल्लित बनाउँछ ।
रमणीय यात्राको योग छ । पूरानो मित्रसँगको भेटले मन प्रसन्न हुनेछ । खानपानले स्वास्थ्य गढबढ हुन सक्छ । खर्च बढे पनि आम्दानी घट्ने छैन । वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त होला ।
अनावश्यक झमेलामा फसिएला । सरकारी निकायको भय होला । नजिकका ब्यक्ति नै काम विगार्न लागि पर्लान् । आर्थिक कारोबार गर्दा बिचार पुर्‍याउनुहोला । निर्णय लिनमा दुविधा होला । दिनको उत्तरार्धमा आफू अनुकुलको समय बन्ला ।
धार्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । आर्थिक लाभ प्राप्त होला । रोकिएको काम बन्नसक्छ । विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ।
लामो समयदेखि अधुरो रहेको धार्मिक कर्म पूरा हुने योग छ । आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ । घरमा अतिथिको आगमन हुन सक्छ । छोटो यात्राको योग छ । आफन्तसँगको भेटले मन प्रफुल्ल हुनेछ । नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ । काम देखाएर अरूलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुनेछ ।
सुधारोन्मुख हुँदै गरेको स्वास्थ्य तामसी बिगार्न सक्छ । खानपिनमा ध्यान दिनुहोला । खर्च अनुरूपको आम्दानी नहुँदा मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ । प्रेम सम्बन्ध ठीकै हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
मानसम्मानको योग छ । सामाजिक ख्याति बढ्नेछ । अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ । व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ।
आइतवार, फाल्गुन ९ २०७७०५:३३:२८
आज २०७७ फाल्गुन १८ गते मंगलबारको राशिफल
आज २०७७ फाल्गुन १७ गते सोमवारको राशिफल
आज २०७७ फाल्गुन १६ गते आइतबारको राशिफल
आज २०७७ फाल्गुन १४ गते शुक्रबारको राशिफल
भारतको संबिधान निर्माता आर.बी अम्बेडकरले भनेका छन् ‘धर्ममा भक्तिभावले मुक्तिमार्गतर्फ अग्रसर गराउँछ तर राजनीतिमा भक्ति वा नायक पूजाले निश्चित रूपमा पतन निम्त्याउँछ । अन्धभक्त कार्यकर्ताको
नसा च्यापिने समस्यामा–बिना अप्रेसन प्राकृतिक समाधान